China M ekara kpaliri welded ntupu ngere (One-piece Post) maka anyanwụ ugboelu Manufacturer na Supplier | Oghere
Ọ bụ a ụdị weld waya ntupu ngere nke ka si akwa ọkwa ígwè waya esichara weldly firstly na mgbe na-eji ekwe igwe na-eme ka V ekara na elu na ala. N'ikpeazụ, mechaa ya na kpaliri kpaliri maka akwa zinc ihe dị ka 450g / m iji belata nchara na corrosion na ojiji. Ọ bụ a elu ike na inogide waya ntupu nsu na-eji predominantly dị ka nchebe mgbochi maka anyanwụ ugbo, ulo oru ubi.
PRO.FENCE nwere ike ịnye ya ahaziri na eriri waya, ntanye ntanye, elu maka ngere,
Nke ahụ dabere na mkpa ọrụ gị. Anyị na-emepụta akwa akwa akwa kama nnukwu otu na otu mpempe akwụkwọ kama iche iche iji belata ụgwọ ọrụ ahụ nke ukwuu ma na-agbanye ume iji hụ na ojiji a na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ngere nke ogo dị elu na ọnụ ala maka ọrụ gị. Anyị ọtụtụ ahịa na-eji ya dị ka nche nsu nke ike osisi, ulo oru ogige ntụrụndụ, adọba ụgbọala na ọtụtụ, okporo ụzọ wdg
A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ ike anyanwụ, ugbo ala, kamakwa enwere ike iji ya na ogige mmepụta ihe, ebe ndị na-adọba ụgbọala, na iche iche n'okporo ụzọ.
Ogwe ogwe: H500-2500mm × W2000-2500mm
Emechara: Hot tinye kpaliri / Electric kpaliri / ntụ ntụ ntekwasa
Usoro na ikuku carbon dị mma nwere ike dị elu, wee mechaa ya na galvanized ọkụ maka zinc nke 450g / m2, chịkọta ya site na iji sus 304 akwa akwa. Ndị ahụ na-arụ ọrụ pụrụ iche na mgbochi corrosion. PRO.FENCE ekweghị nkwa nchara ọ dịkarịa ala maka afọ 6.
Ọ mejupụtara ntupu panel, posts. Usoro dị mfe nwere ike inyere aka wụnye ngwa ngwa na saịtị. Enwere ike ịgbanwe ohere site n’etiti ebe ọbụla o kwere omume ọbụlagodi n’ugwu ahụ dị mgbagwoju anya.
Nkebi Nke: PRO-04 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: Galvanized welded waya nsu maka ugbo na ulo oru ngwa
Osote: Cokwanyere ntekwasa Weld waya ntupu na-apụta maka ulo oru na ugbo ngwa
M ekara kpaliri welded ntupu ngere N'ihi Solar ...